दशैंको उच्च परम्परालाई जातजातिमा लगेर नचाहिँदो हल्ला फैलाएर, नराम्रो बनाउने अधिकार कसैलाई छैन डा.जगमान गुरुङ - Suvham News
दशैंको उच्च परम्परालाई जातजातिमा लगेर नचाहिँदो हल्ला फैलाएर, नराम्रो बनाउने अधिकार कसैलाई छैन डा.जगमान गुरुङ
September 23, 2017 by gsmktm
संस्कृतका विद्वान तथा संस्कृतिविद डा.जगमान गुरुङ नेपाली संस्कृतिलाई गहिरोसँग बुझ्ने इतिहासकार पनि हुनुहुन्छ ।
दशैं त आइसक्यो, दशैं कहाँ मनाउनुहुन्छ ?
दशैं मनाउन म मेरो घर कास्कीकोट आइपुगेको छु । हामी यहाँ एक भएर दशैं मनाउँछौं । हामीले हाम्रै संस्कृति, परम्परा, र चाड पर्वहरु छोड्यौं भने नेपाली हुनको अर्थ पनि गुमाउँछौं । कसैले पनि परम्परा र संस्कृति भुल्नु हुँदैन । आत्मादेखि मान्छेलाई शान्त हुन संस्कृतिले मदत गरेको हुन्छ । इतिहास भुल्नु, संस्कृति भुल्नु भनेको नेपाली हुनुको अस्तित्व मेटाउनु हो । त्यसैले यहाँको शानदार सभ्यतालाई निरन्तरता दिंदै संरक्षण गरौ भन्छु म ।
तपाईंले नेपाली संस्कृतिको मसिनोगरी अनुसन्धान गर्नुभएको छ, भन्दिनुस् न यो दशैं कसरी सुरु भएको हो ?
खासगरी दशैं ऋतु पर्व हो । छ वटा ऋतु मध्ये चार ऋतु मुख्य छन् । हेमन्त ऋतुमा पौष शुक्लपक्षमा मनाइने दशैं हैमन्तिका, वसन्त ऋतुमा चैत्र शुक्लपक्षमा मनाइने वासन्तिका, गृष्ममा आषाढ शुक्लपक्षमा मनाईंने दशैं गृष्मीय, शरद ऋतुमा आश्विन शुक्लपक्षको दिन मनाइने दशैं शारदीय भनिन्छ । शात्रीय मान्यतामा के छ भने हेमन्त ऋतुमा देवी भगवती भोजनम् अर्थात भोजनको लागि बस्नुहुन्छ । बसन्त ऋतुमा स्वायनम् अर्थात सुत्नुहुन्छ । गृष्म ऋतुमा परिवर्तनम् भनेको कोल्टे फेर्नुहुन्छ । र शरद ऋतुमा प्रवोधनम् अर्थात उठ्नुहुन्छ भनिएको छ ।
अन्य समयमा पनि पूजा गरिन्छ देवीको । अन्य महिनामा अन्य आसनमा हुने तर, शरद ऋतुमा देवी उठ्ने हुनाले यो वेलाको दुर्गा पूजालाई विशिष्ट मानेर बडा दशैंको रुपमा धुमधामका साथ मनाइन्छ ।
अर्को कुरा त्यो बेला धर्मयुद्ध हुन्थे । अहिले जस्तो मिसायल थिएनन् । अहिले जस्तो गुरिल्ला थिएनन् । त्यसैले पानी पर्ने र बाढी आउन बन्द भएपछि, खेतीको मैझारो गरेर युद्धको अभ्यास गर्ने गरिन्थ्यो । घटस्थापना देखि दशमीसम्म, क्रमशः सबै हातहतियार एकैठाउँ भेला गरेर सफा गर्ने, त्यसमा साँध लगाउने अर्थात् उध्याउने, पूजा गर्ने गरिन्छ । बडा दशैंको दिन घटस्थापनाको दिन राखिएको घडाको पानीले अभिशेक गरेर अविर र दहिमा चामल मुछेर सबैलाई लगाइदिने र हर्षवढाईंका साथ हतियार निकालेर युद्धको अभ्यास गर्न निस्कने गर्दथे । यसरी मनाइन थालिएको हो दशैं । दशैंमा दिने आशिर्वादमा भएका नामहरुको पनि अर्थ छ ।
राज्य, राज्य बीचका लडाईंमा मात्र हैन, रामायण र महाभारतको लडाईंमा गााउँ नै रित्तिनेगरी मान्छेहरु मरे । धेरै विधवा भए । धेरैले सन्तान गुमाए । कति अनाथ भए । यसले परिवारहरु विश्रृंखलित मात्र भएनन्, वातावरण नै विशाक्त भयो । त्यो अवस्थाले मान्छेको सातो गयो । अहिले भन्दा मान्छेमा डिप्रेशन भयो । अब केही छैन भनेर पूरै नैराश्यता छायो । त्यो अस्तब्यस्त समाज र निराश मान्छेलाई हौसला बढाउन रामायण र महाभारतको युद्धमा ख्याती कमाएकाहरु जस्तै बन्नु भनेर आशिष दिइएको हो । यसबाट मान्छेमा उत्साह जगाइन्थ्यो । त्यसैले अहिलेसम्म पनि त्यहि आशिष दिइने गरिन्छ ।
अनि जनजातिका केही अगुवाहरु रामले रावणलाई जितेको दिनदेखि दशैं मनाउने गरिएको र रावण भनेका हाम्रा पूर्खा हुन् त्यसैले बाहुनले जनजातिमाथी जित हासिल गरेको दिन भएकाले दशैं मनाउने परम्परा हामी मान्दैनौं भन्छन् त ?
यो सबै अनविज्ञहरुले गर्ने कुरा हो । हेर्नुस् है, दशैं कसरी मनाउन थालिएको हो भन्ने कुरा दशैंमा के को पूजा गरिन्छ त्यस्ले प्रष्ट बनाउँछ । दशैंमा हामी रामको कतै पूजा गर्छाैं ? गर्दैनौं । रामणलाई कहिँ सम्झन्छौं ? सम्झन्नांै । दशैंमा त देवीको पूजा हुन्छ । दुर्गा भगवतीको पूजा हुन्छ । नौ दिनमा हामी नौ वटा देवीहरुको पूजा गर्छौं । दुर्गा भनेकी शक्तिको प्रतीक हुन् । दशैं शक्ति उपसनाको पर्व हो । त्यो बेलाका सुर भनेको सत्यको पक्षमा लड्ने र असुर भनेको असत्यको पक्षमा रहेका मान्छे हुन् । तिनै सुरले असुरहरु माथि विजय प्राप्त गरेको दिन अर्थात् दानवहरु माथि विजय प्राप्त गरेको दिनलाई विजयको रुपमा मनाउन थालिएको हो ।
रावण आर्थात् महिषासुरको सन्तान भनेर जनजातिहरु भन्नेले किन भनेका हुन् मलाई थाहा छैन । जहाँसम्म रावणलाई रामले मारेर विजय भएको दिनलाई दशैंको रुपमा मनाइने भन्ने कुरा छ, यो हाम्रो संस्कृति होइन । आयातित कुरा हो । यो कुरा भारतको गंगाको मैदानमा विकास भएको संस्कृति हो । दुर्गा पुजा नेपालको पहाडमा विकास भएको संस्कृति हो । जसलाई यहाँका जनजातिले विकास गरे । गंगाको किनारमा विकास भएको संस्कृति बाहुनहरुले ल्याए । दुइटै संस्कृति उल्लासबाट सुरु भए पनि आएको समय र पृष्ठभूमी फरक छ । तर पछि पछि विस्तारै समान्य हुदै आयो । हाम्रोमा पनि तराईतिर रावणलाई जलाएर दशैं मनाउने गरेको पाइन्छ र उनीहरुले सँगसँगै दुर्गा पूजा पनि गर्न थाले ।
खास कुरा के हो भने मनमुखी बोलेको हो या गुरुमुखी बोल्या हो भनिन्छ गाउँमा । अहिले मान्छे आफैंले बोल्दैछ या अरुका लागि बोलि दिंदैछ, भन्ने नै बुझ्न गाह्रो पर्न थालेको छ । आफ्ना लागि भए सत्य कुरा खोजेर पनि बोल्छ । अरुका लागि बोल्नेलाई जे जे भने पनि भो । तथ्य बिनाकै कुरा ल्याइदिए पनि भयो । दशैं जनजातिको होइन, रावणलाई मारेर सुरु गरिएको उल्लास हो भन्नेहरु आफूले देश जानेर बोलेका होइनन् । मनमुख होइन, गुरुमुख भएर अरुको लागि बोलिरहेका छन् । अहिले केही जनजाति भन्नेहरुले मनको देशलाई माया गर्नेगरी होइन कि अरुको देशमा गएर पैसा कुम्ल्याएर आएकाहरुले यस्तो बोलिरहेका छन् । हिन्दु सभ्यता मास्ने आदिवासी जनजातिको पहिचान मास्ने, देशका जातजाति लडाएर देश तहसनहस बनाउने सात समुन्द्र पारीका क्रिश्चियनहरुको योजनामा आर्थात् गुरुमुख बोलिरहेको छ ।
दशैं मान्ने कुरा हाम्रो राष्ट्रियता बचाउने कि मास्ने भन्नु जस्तै हो । राष्ट्रियता बचाउने भए आफू जन्मेर हुर्केको सभ्यता बचाउनु पर्यो । देशको माया लाग्छ हाम्रो संस्कृति बचाउन लागौं, होइन भने फेरि सुर र असुरको लडाईं लड्न तयार हुनु पर्छ हामी । हाम्रो सभ्यतामाथि क्रिश्चियनको आक्रमण बिरुद्ध उभिनु पर्यो नि । हिजो राष्ट्रियताका लागि भएको युद्धमा हासिल गरेको जितमा दशैं मनाउन थालिएको हो, अव फेरि अर्को लडाईं चले पनि तयार रहौं भन्छु म त ।
तपाईं त्यसो भन्नुहुन्छ तर, जनजातिका केही अगुवाहरु त कति बर्ष देखि दशैंको विरोधमा सेतो टीका लगाएर दशैं मनाउँछन् । रातो टीका हाम्रो पुर्खाको रगत हो भन्छन् नि, होइन र ?
टीका त पहिले जनजातिले मात्र हैन खसआर्यहरुले पनि सेता नै लगाउँथे । किनकी आज पनि हाम्रोमा रातो रङ बनिदैन भारतबाट आउँछ भने त्यो बेला कहाँबाट पाउनु र लगाउनु ? नेवार बजारमा बस्थ्यो । उ ब्यापार पनि गथ्र्यो । त्यसैले उसले पहिला रातो टीका लगाउन थाल्यो । पछिल्लो समयमा अविर आयो, सबैले रातो टीका लगाउन थाले ।
साँच्चै भन्ने हो भने बाहुनहरु हानबैरी गर्ने जात नै होइनन् । हुन त अहिले सेनामा बाहुन छन् । हिजो क्षत्री, ठकुरी, गुरुङ, मगरहरु मात्र सेनामा हुन्थे । आजजस्तो सेना, हात हतियार थिएनन् । शत्रुलाई मार्न नजिकै गएर काट्नै पथ्र्यो । जनजाति सुरा थिए । सुरा जनजातिहरु मार हान्नेमा हुन्थे । देउराली, देवीथानमा मार हान्ने र त्यसबाट चुहिएको रगत थालको चामलमा चुहाइन्थ्यो र त्यो रगतमा मुछिएको चामल सबैलाई तिनै मार हान्नेले शक्तिको प्रतीक मानेर लगाइदिन्थे । अहिले आएर रातो टीका रगत हो, हाम्रो होइन भन्न पाइन्छ ? पाइन्न । किनकी संस्कृति जोगाउने जिम्मा हामी पहाडमा सभ्यता लिएर आएका जनजातिहरुको नै हो । त्यसबेला लडाका जाति भनेका दुश्मनलाई उत्तानो पारेर प्छारेर, दुश्मनको छातीमा घुँडाले टेकेर, छाती चिरेर मुटुको रगत झिकी त्यसको टीका लगाउने प्रमुख जाति हुन् हाम्रा पुर्खा । यसमा त गर्व पो गर्नु पर्यो । हाम्रा पुर्खाको त्यो शानको ब्याख्या पो गर्नु पर्यो । उल्टो भाग्ने होइन नि ।
तपाईं इतिहास नविर्सनु भन्नुहुन्छ, जनजाति अगुवाहरु आफू राजाको पाला देखि हेपिएको भन्दै विरोध गर्छन् त ?
तपाईंलाई एउटा उदाहरण दिउँ । संखुवासभाको खाँदबारीमा पाङवा भन्ने गाउँ छ । म २०४७ सालमा जाँदा त्यहाँ गंगाप्रसाद राई त्यस गाँउका मुखिया थिए । उनलाई ५२ पगरीको राई भनिन्थ्यो । किनकी त्यहाँ ५२ जातका मान्छे बस्थे । उनलाई गाउँलेले पैसा उठाएर दिने र उनले मालपोतमा गएर काम गर्ने गर्दथे । दशैंको समयमा बाहुन दहि र केरा बोकेर मुखिया मान्न पुग्थे । अन्यले बली दिएका कुरा लिएर जान्थे ।
बाहुन त जाँड रक्सी नखाने, मासु नखाने जात हो । तर बाहुन बात लाग्दा जातबाट तल झर्ने हुन्थ्यो । ती बात लागेकाहरुलाई गंगाप्रसादको आँगनमा बोलाईंन्थो । गोवरले लिपेर ठिक्क पारेको ठाउँमा ती बात लागेका तागाधारीलाई झिकाइन्थ्यो । अनि गंगाप्रसाद राई, जसले सुगुरको मासु खान्थे, काटमार गर्थे । उनले सुनपानी छर्केर तिनलाई झरेको जातबाट माथि उक्लेको घाषणा गर्थे । त्यहाँ उनले जे भन्यो त्यहि हुन्थ्यो ।
त्यस्तै तनहुँको भिमादमा बिष्णुबीर आले अहिले पनि हुनुहुन्छ । उहाँले त्यस्ता जात खसेका बाहुनलाई सुनपानी छर्केर आफ्नो जातमा फर्कएको कुरा सुन्न अहिले पनि सकिन्छ । अनि हामी जनजातिले त्यो बेला कति धेरै पावर ‘इन्ज्वे’ गरेर बसेका रहेछौं त ? त्यो भुलेर आज नचाहिँदो अफवाह फैलाउने काम गर्नु हुँदै हुँदैन ।
पुराना यस्तै गाउँहरु अनगिन्ती छन् हेर्नुस है । पोखरामा एउटा मिया पाटन भन्ने ठाउँ छ । त्यो मुसलमानहरुको बस्ती भएको ठाउँ हो । त्यो टोल र अन्य टोल मिलेर एउटा गाउँ बनेको थियो । त्यहाँ रैमतली मुखिया र महमोद मिया गाउँका मुखिया थिए । दशैंको बेला त्यहाँ वरिपरीका बाहुन, क्षेत्री, गुरुङ, दमाई सबै मुखिया मान्न जान्थे । त्यो मुसलमानलाई हिन्दुले गाउँको मुखिया मानेको परम्परा मुसलमान देशमा छ ? ल देखाउन् त ? हाम्रोमा छ । त्यसैले दशैंको उच्च परम्परालाई जातजातिमा लगेर नचाहिँदो हल्ला फैलाएर, नराम्रो बनाउने अधिकार कसैलाई छैन । त्यसकारण दशैं विशिष्ट समन्वयकारी संस्कृति हो । यसले हरेक जातजातिको उच्च सम्मान गरेको छ । अनि अपमानको कुरा कहाँबाट आयो ?
तपाईं सबै जातजातिबीच परस्पर सम्मान थियो भन्नुहुन्छ, तर जनजाति हेपिएको कुरा चाहिँ कसरी आयो ?
यो सरासर गलत हो । पैसाका लागि यस्तो प्रचार भएको हो । हाम्रो इतिहास मास्न गरिएको नियोजित प्रचार हो । इतिहास जोगाउनु पर्नेमा उल्टो यसरी गलत प्रचारले मार्न पाईंदैन । चीनमा लामो समय लडाईंपछि माओले राज्य गरे । लडाईंको समयमा सबै भत्काइयो । तर जव १० बर्ष अघि चीनले ओलम्पिकको आयोजना गर्यो । चराको गूँड नाम गरेको स्टेडियम बनायो । त्योबेला चीनले आफ्ना ५ हजार बर्ष पुराना कुरा झल्काउने गरी त्यो स्टेडियम बनाएको थियो । हरेक देशले आफू बलियो देखाउन गर्ने भनेकै आफ्नो इतिहासमा गर्व गरेर हो, मासेर होइन । त्यसलाई भनिन्छ सिंहावलोकन । हामीले पनि यहि गर्नुपर्छ ।
उहिले तागाधारी र मतवाली अर्थात जाँड खाने र नखाने भनेर सम्बोधन हुन्थ्यो । राज्याधिकार र धर्माधिकारी भन्ने हुन्थ्यो राज्याधिकारी भनेको राजा हो र धर्माधिकारी भन्या वडागुरुज्यू हुन्थे । राजा भन्दा बडागुरुज्यू एक स्थान माथि हुन्थे । राजालाई श्री ५ र वडागुरुज्यूलाई श्री ६ लेखिन्थ्यो । कत्रो सम्मान ?
सुरुका बेलामा खान र सेन राजाका हातमा राज्य थिए । मगर पुजारी र बाहुन पुरेत थिए । कसरी मिलेर बसेका थिए ? बडा दशैंको पूजा गर्दा पनि राज्याधिकारीका वडागुरुज्यूका प्रतिनिधि बाहुन पुरोहितले संकल्प बाक्य भन्ने र कोटको मुख्य ब्यक्तिले पानी समातेर मौलो पूजा गर्ने परम्परा छ । कोट भनेको कोठा हो । त्यहाँ मगर पुजारी बाहेक अन्य कोही बाहुन पनि पस्न पाउँदैनथ्यो । देशभरीका बडा दशैंको मौलो पूजा गर्ने ठाउँमा तिनै बीर उमराउले पूज्ने गर्थे । बीर उमराउहरु प्रायः तागाधारी भन्दा आदिबासी नै छन् । अनि हाम्रो दशैं होइन भन्न कहाँ पाइन्छ ?
दशैं देशैभरका जातजातिको हो भन्ने केही सांस्कृतिक उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ ?
म अहिले याङजाकोटमा छु । यहाँ पनि दशैंको पूजा हुन्छ । त्यो परम्परा स्थीर भएको मात्र हो । माथि डाँडामा याङजाकोट छ । त्यहाँको घरलाई कोट घर भनिन्छ । औंशीको दिन पनि बिहानै नगराको पूजा हुन्छ । नगरा बजाउँदै कोटघर पुगेर फर्किइन्छ । यो दशैं आयो है भनेर सबैलाई जनाउ दिइएको हो । यो नगरा बजाउने काम नगर्चिले गर्छ ।
घटस्थापनाको दिनमा मगर पुजारीकी श्रीमतीले नुहाएर चोखोनिधो गरेर मार्सी चामलको जाँड राख्छे । त्यो जाँड फूलपातीमा बसाउन थाल्छ । त्यो जाँड मीठो भएन भने दुर्गा रिसाइन् भन्ने हुन्थ्यो । अब कालरात्रीको मध्यरातमा जुन ढल्केपछि मगर पुजारीले केराको पातमाथि जाँडको पोको पारेर कालीलाई चढाउँछ र बाहुन पुरोहितले संकल्प भन्छ । नौ नौ वटा बोतामा पूज्ने जमरा राखिएको हुन्छ । त्यो टीका लगाउँदा प्रयोग गरिंदैन । टीका लगाउँदा लगाइदिने जमरा घटस्थापनाको दिन राखिन्छ ।
फूलपातीको दिन पुरानो खुँडा, खुकुरी सफा गरेर, साँध लगाएर, रातो सेतो ध्वजा लगाएर सिंगारेर दुर्गा देवीको स्थान स्थापना गरिन्छ । त्यसलाई दुर्गा जगाउँने, खाँडो जगाउँने भनिन्छ । खाँडो भनेको शक्ति हो । यसलाई खड्गसिद्धी पनि भनिन्छ ।
अष्ठमीको दिन विहान झुल्के घाममा वलीपूजा गर्ने गरिन्छ । बलीपूजा मुख्य पूजा हो । कोटमा बाहुन पुरोहित र कोटको प्रमुख कर्ता हुन्छ । अनि नगरा बजाउँदै राग मध्येको पनि बादशाह राग सबैभन्दा राम्रो राग बजाउँदै लगिन्छ । जुन राग शाही कालमा ठकुरीको विवाहमा बाहेक बाहुनको बिवाहमा पनि बजाउन पाईंदैनथ्यो । त्यो बजाउने नगर्ची हुन्छन् । मालसिरी धुन बजाईछ । त्यो पनि नेपालीमा छ । त्यो खासमा त्यो बेलाका सेनाको हौसला बढाउन बजाइएको हो । त्यसमा चारै दिशा नेपालले डंक फिंजायो भनेर लेखिएको छ । सेनाका प्रमुख बाहुन पनि थिए तर अधिकांश जनजाति थिए । अनि हाम्रो होइन दशैं भनेर गलत प्रचार गर्न पाइन्छ ?
मालसिरी धुन सहित त्यसरी कोटमा पुगेपछि मार हान्ने गरिन्थ्यो । जसले एकै मारमा छिनाउन सक्यो उसलाई पगरी गुथाउने चलन थियो । त्यो मार हान्ने काममा सेना नै हुन्थे र प्रायः जनजाति हुन्थे । धेरै ठाउँमा अहिले पनि जसले मार हान्दै आएका थिए उसैका सन्तानले बिंडो थामेका छन् । जस्तो कास्कीकोटमा फेवाली राना मगरले मार हान्छ । उ बाहेक अरुले मार हान्न पाउँदैन ।
दशैको टीकाको दिन घटस्थापनामा राखिएको घडाको जलले अभिषेक गरी टीका लगाएर रमाइलो गर्ने चलन छ । काठमाडौंका नेवारहरुले दशैंको दिन सेतो फेटा गुथेर सेतै जामा लगाएर हातमा खुँडा बोकेर नगर परिक्रमा गर्ने गर्दछन् ।
गण्डकी क्षेत्रमा चाहिँ सराप खेल्ने भनिन्छ । त्यहाँ पनि खुँडा खुकुरीहरु लिएर निस्कने गरिन्छ । यस्तो सराप खेल्न गुरुङ, मगर, दमाइर्, कामी बाहुन, कसैलाई छेकवार छैन । यो युद्धको अभ्यास स्वरुप गर्ने गरिन्थ्यो । दशैंमा साइत गरेपछि अघिपछि साइत हेर्न पर्दैन भन्ने थियो । यसरी हरेक जातिको समन्वयमा चलेको यो दशैं कसैले कसैलाई हेपेको भनेर गलत प्रचार गर्नु राष्ट्रको लागि घात बाहेक हरु केही होइन ।
स्रोत- चक्रपथ डटकम
Prevविश्वका एक मात्र हिन्दु सम्राट तथा नेपालका राजा ज्ञानेन्द्र शाहले दशैमा सर्वसाधारणलाई टिका नलागाउने
Nextअष्ट्रेलिया को सम्सदमा सनातन हिन्दु पराम्परा अनुसार पुजा आजा गरियो